Brazil inobhadharisa Apple mamirioni maviri emadhora nekuda kwekutsausa kushambadzira | Ndinobva mac
Brazil inobhadharisa Apple $ XNUMX miriyoni yekushambadzira kunotsausa
Apple ichangobva kubhadhariswa faindi yemamirioni maviri nezviremera zveBrazil nokusasanganisira mumidziyo yako mitsva yekutengesa, iyojaja. Kambani yekuCalifornia yakazivisa izvi kwete nguva diki diki kuitira kuti isaburitse kabhoni muna 2030. Nenzira iyi, maneja vezvakatikomberedza vekambani vanonzwisisa kuti kwatova nemachaja mazhinji mudzimba uye anogona kupihwa. Sanganisira mukutengesa zvitsva zvishandiso zvakaita seApple Watch kana AirPods.
Iyo kambani yakafunga kuti kuitira kuzadzisa zvinangwa zvayo zvezvakatipoteredza uye kuva 0% kabhoni kambani na2030, yaifanira kutanga kusasanganisira charger mumidziyo mitsva inotengeswa. Nekudaro, chiyero ichi chaisada zvakanyanya. Nyika dzakaita seFrance dzakatora matanho ekurwisa uye ikozvino Brazil kuburikidza neProcon-SP, yeBrazil inodzivirira vatengi mutero inodzora iri muSão Paulo abhadharisa Apple yekusasanganisira charger mubhokisi.
Huwandu hwefaindi hwayo hahuna kukosha. Iyo faindi yakatenderedza $ 2 mamirioni (R $ 10,5 mamirioni) uye mari iyi ingangoita 1 euro muzana yekambani. Chinhu chakakosha chinangwa. Sangano reBrazil rinonongedza kuti zviri ne «yekushambadzira kushambadzira, kutengeswa kwechigadzirwa pasina charger uye zvisina kukodzera zvikamu ». Procon Inoti Apple haina kupindura payakabvunzwa kana mutengo weiyo iPhone 12 nezvimwe zvigadzirwa zvakafanana zvakadonha mushure mekubvisa charger, ndeupi mutengo weiyo iPhone uye uye isina iyo charger, uye kana ikadzora huwandu hwechaja dzakagadzirwa.
Executive director weProcon-SP, Fernando Capez, akati "Apple inofanirwa kunzwisisa kuti kuBrazil kune yakasimba mitemo yekuchengetedza vatengi uye masangano. Iwe unofanirwa kuremekedza iyi mitemo uye aya masangano.
Pari zvino hapana mhinduro kubva kuapuro uye hatizomboziva kana achingobhadhara faindi yacho kana kukwidza nyaya yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Brazil inobhadharisa Apple $ XNUMX miriyoni yekushambadzira kunotsausa
Maitiro ekudhawunirodha mutambo mahara kwenguva yakati rebei
Apple Up's "Up Inotevera" Inoenda Kumarudzi Ose NeVatsva Nyowani